देशभर सार्वजनिक बिदा ! – Namaste Host
April 12, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on देशभर सार्वजनिक बिदा !
काठमाडौं । सरकारले आउँदो बुधवार अर्थात बैशाख १ गते देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । नव वर्ष २०७८ को अवसर पारेर सरकारले उक्त सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।
सरकारले चैत ९ गते सार्वजनिक गरेको नेपाल राजपत्रमा नै उक्त दिन पर्व बिदा दिने उल्लेख गरेको छ । सोही अनुसार उक्त दिन देशभर सार्वजनिक बिदा हुने भएको हो ।
अन्य समाचार : खोलाभित्रको ढुङ्गा निकालेर बेच्दै परिवार पाल्ने सुन्दरीको जादुमय स्वर, गरिबीमा लुकेको ढुङ्गावालीको सबैलाई चकित पार्ने आवाज (भिडियो सहित)
एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएकी रोदा राई जसको आवाजमा छुट्टै किसिमको जादु सुनिन्छ । पहाडको एकलास अनि खोलाको नजिकैमा उनको घर रहेको छ ।
घरको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको परिवारमा बिचरा कलिलै उमेरमा सम्पुर्ण जिम्मेवारी बोकेकी रोदा राईले निकै मीठो गित गाउछिन । उनले गाएको गित सुनेर सबै चकित हुन्छन । जादुमय स्वरकी धनी रोदाले बिहानैदेखि खोलाभित्रको ढुङ्गा निकालेर एक ठाउमा भेला गरेर थुपारेर बिक्री गरेर घर परिवार र आमाबुबा पाल्छिन ।
उनका बुबाले आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण आफुले छोरिको गायिका बन्ने सपना पूरा गर्न नसकेको बताउदै आँसु झारेका थिए । उनलाई सल्लाह सुझाब अनि केहि सहयोग गर्न चाहनेले सुपर अनलाइन टिभिका समीर सुबेदीलाई ९८१४९३०७३६ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । बोल्दा बोल्दै एक्कासि रुन थालेकी रोदाले मनै छुने गितहरु एकपछी अर्को गर्दै यसरी सुनाइन । तलको भिडियोमा हेर्नुहोला आँसु आउनेछ ।
मोबाइलमा कुन केटासंग बोलेको भनेर आमाले प्रश्न गरेपछि छोरीले आमालाई दिएको त्यो ध’क्का !